SEHA-PIHARIANA VOLAMENA : Tena fanoitra amin’ny fampandrosoana saingy be sakantsakana
Amin’ny ankapobeny dia tsy mbola manara-penitra ny seha-pihariana volamena eto amintsika. Maro ny antony mahatonga izany ary anisany ny tsy fipetrahan’ny lalàna mifehy ny fitrandrahana na ’code minier’ mitsinjo ny mpitrandraka. 8 juin 2021
Saika ahitana volamena avokoa ny Faritra rehetra eto Madagasikara, saingy anisan’ireo be mpitrandraka miaraka amin’Ambilobe sy Mananjary ary Tsaratanàna i Maevatanàna. Samy ao amin’ny Faritra Betsiboka i Maevatanàna sy Tsaratanàna. Olona an-jatony maro mba tsy hilazana fa an‘arivony ny miaina amin’ity sehatr’asa ity. Misy mitrandraka volamena avokoa ireo kaominina rehetra ao, fa ny kalitao no samihafa, araka ny nambaran’ireo mponina. Mahay volamena ny ankamaroan’ny mponina any an-toerana, hatramin’ny zazakely.
Betsaka koa ny mahay manivana ka saika manana sahafa fanivanana volamena avokoa ny isan-tokantrano. Mirotsaka an-tsehatra manivana ny lehilahy sy ny vehivavy hatramin’ny zaza. “Ireo renirano rehetra ao dia misy volamena avokoa”, hoy ireo mponina. Araka ny nambaran’izy ireo dia tsy voatery hoe mahazo foana, fa misy fotoana mahazo kely ary misy fotoana tena tsy mahazo mihitsy. Amin’ny fotoanan’ny main-tany no tena manivana volamena izy ireo, fa miasa tanimbary kosa amin’ny fotoam-pambolena. Tsy atao ambanin-javatra ny fambolena fa manampy fotsiny ny volamena.
Karazana fitrandrahana ao Betsiboka
Misy karazany maromaro ny fomba fitrandrahana volamena ao amin’ny Faritra Betsiboka. Misy ireo manivana eny amin’ny renirano. Misy kosa ireo mangady volamena an-tanety manaraka ’filon’. Ankoatra izay dia misy ny manao ’sakana’, izany hoe sakanana avily lalana ny rano dia angadiana ny tany teo amin’ ilay lalan-drano teo aloha ary iny no sivanina.
Samy manana ny fitaovana ampiasainy ihany koa ka misy ny sahafa fotsiny, izany hoe mitavana. Misy ny motopompes sy jigs ho an’ireo manao sakana. Ny sakana kosa dia atao anaty gony natokana ho an’izany ny tany ka gony misy tany an-jatony na an’arivony no isakanana ny lalan’ny rano sy hamiliana azy. Misy ihany koa ilay milina enti-misivana ny tany. Ho an’ireo mpitrandraka manaraka filon dia misy ny mampiasa olona sy angady. Misy kosa ny mampiasa milina toy ny excavateurs na pelle mécanique. Misy miasa any ihany koa ny barge karazana sambo mitrandraka eny ambony rano...
Efa tafiditra anatin’ny kolontsaina sy fomba amam-panaon’ny mponina ao Maevatanàna ny fitrandrahana volamena. Efa zato taona maro no nisy fitrandrahana teto, hoy izy ireo, satria ny mpanjaka merina taloha dia efa nitrandraka teto.
Tsy manana fahazoan-dalana ny ankamaroan’izy ireo fa rehefa mila vola, dia mandeha misivana kely ary mivarotra izay azo. Manome karatra orpailleurs ihany ny kaominina, hoy izy ireo, saingy tsy maika haka izany ny mponina.
Misy tsena isaky ny kaominina ka mandritra ny tsena no misy ny tsenam-bolamena. Alahady ny tsena ao Antanimbary izay tena malaza indrindra, eo koa ny an’i Maevatanàna, ny an’i Antsiafabositra... mbola misy koa ao Ambodimanga sy 5/5...
Avy any an-drenivohitra ny ’patrons’
Maro ambaratonga ny mpividy volamena ao Betsiboka. Betsaka ireo ’patrons’ volamena ao amin’ny Faritra Betsiboka izay efa fantatry ny maro. Izy ireo dia manana ’mpandanja’ maro ihany koa na mpividy volamena ankoatra ny dokany ividianany, miparitaka hatreny amin’ny fokontany. Izy ireo indray no mivarotra amin’ireo ’patrons’ avy any an-drenivohitra. Araka ny fanazavana azo dia mametraka vola an’arivony tapitrisa ireo ’patrons’ ka iny no ividianan’izy ireo ny volamena avy amin’ireo mpanivana sy mpamokatra.
Alefa mialoha ny vola ary tonga izy ireo maka ny vokatra rehefa tapitra ny tsena. Misy koa mpividy avy any an-drenivohitra midina ao Betsiboka mividy volamena isaky ny tsena. Anisan’ny mampihodina ny toekarena ao Betsiboka ny volamena, ary azo lazaina fa tsy ratsy fari-piainana ny mponina ao.
Miovaova ny vidin’ny volamena ary antony maro no mampiova azy. Raha vao vitsy ny mpividy any an-toerana, ohatra, dia midina ny vidiny. Raha vao maro kosa dia misy fifaninanana ka miakatra ny vidiny. Eo ihany koa ny vidiny akan’ireo ’patrons’ any Antananarivo azy.
Tafidina 50 000 Ariary ny iray grama
Mbola eo ihany koa ny vidin’ny volamena eo amin’ny tsenam-barotra iraisam-pirenena sy ny zava-misy eto amin’ny Firenena, araka ny nambaran’izy ireo, tamin’ny fihibohana voalohany dia tafidina 50 000 ariary ny volamena iray grama. Misy fotoana indray dia manodidina ny 190 000 ariary ny grama. Amin’ny andavanandro sy matetika kosa dia 160 000 ariary ka hatramin’ny 180 000 ariary ny iray grama. Anisan’ny tsara kalitao satria 24 carats ny volamena ao Betsiboka. Manana karatra fanangonana vokatra ireo ’patrons’ ao Betsiboka amin’ny ankapobeny, saingy tsy betsaka ny vokatra ambara amin’ny fomba ofisialy. Tsena iray nisokatra ho azy ireo ny fandraisan’ny Banky foibe volamena, saingy nalaky nijanona izany.
Hatramin’ny fihibohana dia tsy tafidina any Maevatanàna intsony ireo mpividy avy any Antananarivo. Miangona ao ny vokatra noho izany ka mihena ny fidiram-bolan’ny mponina na mpitrandraka na mpividy. Ireo entana efa tonga ao Antananarivo kosa dia tsy misy sahy maka. Taorian’ireny volamena 73 kilao tratra tany Afrika Atsimo ireny. Nisy ihany koa fisamborana sy fampidirana am-ponja ireo mpanondrana ara-dalàna lehibe tao Antananarivo. Ny antony nambara moa dia ny hoe tsy nampody vola vahiny izy ireo. Mbola olana ihany koa ny fanenjehana ireo olona mitady mpividy. Raha hita maso mibaribary ireo mpividy volamena tapaka sy efa niasa, dia tsy misy sahy milaza ho mpividy volamena vaovao mihitsy. Milaza ny efa niala tamin’io seha-pihariana io avokoa ny mpividy maro.
Ireo mpividy moa dia tsy miseho vatana fa mandefa mpanelanelana. Maro dia maro anefa ireo mpanelanelana ka misy amin’izy ireo miara-miasa amin’ny Polisin’ny harena ankibon’ny tany sy ny Polisim-pirenena na mpitandro filaminana hafa. Ravain’izy ireo ny volamenan’olona, na akany volabe ireo tratra, izay tsy manaiky manome kosa dia aiditra am-ponja satria ’tsy manara-dalàna’, hono.
Olana ny fidirana amin’ny sehatry ny matihanina
Fantatra fa betsaka amin’ireo mpanondrana no manondrana an-tsokosoko ny entany. Ny fahasarotan’ny fanaovana antontan-taratasy sy ny fanarahana ny lalàna no tondroin’ny maro tsy mampaharisika azy ireo hiditra amin’ny sehatry ny matihanina... ary ny tena olana lehibe dia miato avokoa ny fanomezan-dalana efa taona maro. Efa mipetraka ny ANOR na office nationale de l’or misahana ny volamena saingy miato ny fanomezan-dalana.
Efa azo atao anefa ny mametraka ’comptoir de l’or’ hividy volamena araka ny lalàna, saingy mila mametraka ’caution’ 20 tapitrisa Ariary ahazoana fahazoan-dalana miasa mandritra ny roa taona. Toy izany koa ny ’comptoir de fonte’ ahafahana mandrendrika volamena. Tsy maintsy orinasa malagasy mitsangana amin’ny EDBM sy mahaloa io ’caution’ io no mahazo ny ’agrément’, nefa mbola misy koa ny hetra sy haba. Miato tanteraka anefa ny fanomezana io agrément io, ankehitriny. Ho an’ny mpanangona volamena indray dia misy ny karatra mpanangom-bokatra sokajy voalohany na carte collecteur categorie I alaina eny amin’ny kaominina ahafahana miasa ao amin’io kaominina io, saingy tsy mahazo mivoaka. Misy kosa ny ’carte collecteur categorie II’ izay ampiasaina mandritra ny iray taona ary alaina eny amin’ny ANOR ary andoavana 500 000 Ariary isan-taona.